China Single isikulufa extruder Ukwakha futhi Factory | Jiahao
Isikulufa extruder esisodwa sakhiwa ngesikulufu se-Archimedean esijikeleza emgqonyeni oshisayo. Ngenxa yesakhiwo sayo esilula, ukukhiqizwa okulula, ukusebenza kahle kokusebenza okuphezulu nentengo ephansi, isetshenziswa kabanzi. Ubuchwepheshe obukhule kakhulu nohlobo olusetshenziswe kakhulu lwe-extruder.
Njengamanje, isikulufa extruder esisodwa sakhiwe kusukela kwesakhiwo sokuqala esivundlile, njenge-damping screw block, isikulufa se-exhaust, umgqomo wesikulufa, iphayiphu yomgqomo, isakhiwo sebhulokhi nezinye izinhlobo ezahlukene zesakhiwo. Ngasikhathi sinye, ngenxa yesikhala esincane esihlala i-screw extruder esisodwa, sekuyinto yokusebenza eyinhloko emkhakheni wokucubungula okuyinhlanganisela nefilimu yokubumba epulasitiki.
1. Ipayipi extrusion: ilungele ipayipi le-PP-R, ipayipi legesi le-PE, ipayipi elixhunywe ku-PEX, ipayipi elihlanganisiwe le-aluminium, ipayipi le-ABS, ipayipi le-PVC, ipayipi le-silicon core kanye nazo zonke izinhlobo zepayipi elihlanganayo.
2. Plate kanye sheet sheet: extrusion of PVC, isilwane, PS, PP, PC kanye namanye amaphrofayli kanye amapuleti. Ezinye izinhlobo zepulasitiki extrusion, ezifana nentambo, induku, njll.
3.Ukukhishwa kwephrofayili: lungisa ijubane le-extruder futhi ushintshe ukwakheka kwesikulufu se-extrusion, esingasetshenziselwa ukukhiqiza i-PVC, i-polyolefin namanye amaphrofayli epulasitiki. I-granulation eshintshiwe: ifanele ukuxubana, ukuguqulwa nokuqiniswa kwe-granulation yamapulasitiki ahlukahlukene.
Izici ze-screw extruder eyodwa:
·Ijubane eliphakeme kanye nokuvunwa okuphezulu Ukukhishwa Kususelwa kukhwalithi ephezulu.
·Umqondo wokuklama we-plasticization ephansi yokushisa uqinisekisa ukukhishwa kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme.
·Idizayini emibili yokuklama isiyonke, qinisa umsebenzi weplastikhi, uqinisekise ukusebenza okuphezulu kwe-extrusion.
·Isithiyo esikhethekile kanye nokuhlanganiswa kokuhlanganiswa okuningiliziwe kuqinisekisa umphumela wokuhlanganiswa kwezinto.
·Ukukhishwa kwe-torque ephezulu, ukuthwala okukhulu kakhulu.
·Amagiya nemiphini yenziwa ngensimbi ephezulu yamandla, i-carburized kanye nomhlabathi.
·Ubulukhuni obuphakeme, ukuqeda okuphezulu, umsindo ophansi kakhulu.
·Isilawuli esihlakaniphile se-PLC singabona ukuxhumana phakathi kwemishini emikhulu nokusizayo.
Kulula ukuqapha isikhombimsebenzisi somshini womuntu, okulula ukusiqonda isimo sokucubungula nesimo somshini.
·Imodi yokulawula (ithuluzi lokulawula ukushisa) ingashintshwa njengoba kudingeka.
·Okokusebenza yi-38CrMoAl / ukwelashwa kwe-nitriding, gqoka ukumelana.
·Ukuqina kokulawula okushisa okuqinile, kuhlanganiswe nokupholisa komoya nokupholisa kwamanzi abandayo.
·Idizayini yokungena ehlukile, enedivayisi ephelele yokupholisa amanzi.
·Umgqomo wesikulufu onemikhono yokuphakela indawo engaphezulu yokugezela ungathuthukisa umsebenzi wokuphakela, okunikeza isiqinisekiso sokukhishwa kwejubane eliphezulu nesivuno esikhulu.
Isikulufa esisodwa extruder Izici eziyinhloko:
Uhlelo lokulawula imojula yekhompyutha oluthuthukisiwe lwenza ukuthi kuqaliswe ukulawula okuzenzakalelayo kulayini jikelele wokukhiqiza.
Uhlelo lokulawula izinga lokushisa lokusebenza okuhle kakhulu luqinisekisa ukuphuma okuzinzile.
Uhlelo oluqhutshwa ngamandla luqinisekisa ukuqina nokugcinwa kalula.
Idizayini yokupholisa okuphoqelela amanzi nokondla umkhono onemifantu iqinisekisa ukukhiqizwa okuzinzile.
Umklamo wokuhuzuka ophansi wesikulufu
Ukuhlanganiswa okuphezulu kwempahla
Ukuhlanganiswa ngobumnene kwento
Ukusetshenziswa okuphansi kwamandla
Ngisho i-chroma nomphumela omuhle kakhulu wokukhiqizwa kokuhlanganiswa kwengxube
Main Technical Ipharamitha
Imodeli JHD45 JHD60 JHD75 JHD90 JHD100 JHD120 JHD150
Amandla kagesi (KW) 7.5-45 22-90 37-132 45-185 55-280 75-315 90-355
isikulufa dia. (mm) 45 60 75 90 100 120 150
Isilinganiso se-L / D 25-33 25-33 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35
Kukhiqizwe ipulasitiki PVC, PE, PP, PS, ABS, PA, PMMA, PET njll
Ukukhishwa kwe-extrusion Okuhlukahlukene ngokusho kwepulasitiki ehlukile futhi ifakwe imishini
Olandelayo: I-twin eyindilinga eyindilinga
I-Double Screw Extruder
Intulo Double Plastic extruder
Mini Intulo extruder Machine
I-Plastic Granules Twin Screw Extruder
PVC Twin Intulo extruder
Isikulufa extruder Machine
Isikulufa Esingashadile sePulasitiki
Umshini We-Twin Screw Extruder
I-Twin Screw Plastic Extruder